۩ शङ्कर लामिछाने स्मृति घर: लघु संस्मरण, लघु लिपिमा शङ्कर दाइ
शङ्कर लामिछानेसँग मेरो पहिलो भेट करफोकको एक साहित्यिक जमघटमा भएको थियो, सन् १९५२ सालतिर । त्यस जमघटमा सबैभनदा केटौले, 'स्मार्ट' र जाँगरिला देखिने काठमान्डुका प्रतिनिधि उनै थिए ।
म जब कलकत्ता छोडेर काठमाडौँ आएँ, शङ्कर दाइको विवाह रत्‍ना राइसँग भइसकेको रहेछ । काठमाडौको एक बाहुन युवकले राइ युवतीसँग बिहे गर्नु भनेको तिनताकको नेपाली समाजमा एउटा ठूलो विद्रोह, एउटा सामाजिक क्रान्ति गर्नु सरह नै थियो । फेरि रत्‍ना, जसलाई म दार्जिलिङदेखि नै चिन्थेँ र जो काठमाडौँमा आयोजित नेपाल भारत छात्र सम्मेलनमा हामीसँगै प्रतिनिधि भएर आएकी थिइन्, उनैसँग शङ्कर दाइको विवाह भएको सुन्दा विद्रोहीको रूपमा उनीप्रति जागेको आदर भावमा आत्मीय नाता कुटुम्बपना पनि थपिएको थियो ।
काठमाडौँमा मेरा दिदी-बहिनी कुनै नभएकाले मैले रत्‍ना दिदी र यांगजि (शेर्पा) बहिनीको हातबाट भाइटीका थाप्ने प्रक्रिया पनि सुरू गरेँ । यांगजि र रत्‍नाले एकै ठाउँ, शङ्कर दाइकै डेरामा हामीलाई भाइटीका लगाइदिने गर्थे । हुँदाहुँदा यस सहरमा मेरो दोस्रो घर (सेकेण्ड होम) पनि त्यहीँ हुनगयो । यसरी जीवनका १५-२० हिउँद-वर्षासँसँगै रुझेर, भिजेर, रमेर र गमेर शङ्कर दाइसँग बिताएँ । व्यावहारिक जीवनमा लगायत साहित्यिक र वैचारिक यात्रामा समेत अनेक सहयोग र अगुवाइ मैले उनैबाट पाएँ । भनूँ नै भने कथा, कविता, नाटक आदि विधाबाट निबन्धतिरै कलम चलाउन पनि मलाई सबैभन्दा धेरै प्रेरित उनैले गरे ।
यांगजि बहिनी र म दुवैको जागिर खुस्केपछि हामीले साझेदारीमा एउटा 'स्ट्रक्चरल' (Structural) कम्पनी स्थापना गर्‍यौँ । त्यसको 'न्वारान' श,कर दाइले नै गरिदिएका थिए । त्यो अत्यन्त नौलो नाउँ थियो 'स्ट्रक्टो नेपाल' ।
अझ एकपल्ट मैले प्रेस राख्‍नलाग्दा पनि दाइसँगै सल्लाह मागेँ ।
"कतै प्रेस हेर्नुभएको छ ?" - उनको प्रश्‍न थियो ।
"त्यसो भए एकछिन पर्खौँ । वीरगञ्जमा एउटा प्रेस बिकाउ छ रे । त्यो मेरै साथीको हो । ऊ अहिले आउँदै पनि छ । राम्रो रहेछ र दाम-काम मिल्यो भने त्यही लिउँला, हुन्न ?"
"हुन्छ, तर वीरगञ्जबाट यहाँ ल्याउन पो गाह्रो पर्ला ।"
म अनकनाए जस्तो लागेर होला, दाइले भने, "अरे के ठूलो कुरा छ ? हामी दुवै सँगै जाउँला, रमाइलो पनि गरौँला, प्रेस पनि ल्याउँला । पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार ।" गट्टट् हाँसोको फोहोरा छुट्यो ।
र म पनि हाँसेँ ।
त्यसै गर्‍यौँ पनि । उनी मसँग वीरगञ्जसम्म गए मात्र होइन, ३-४ दिन सँगै बसे, प्रेसबारे जानकारी भएका व्यक्तिहरूबाट मेसिन जाँच्न लगाए, चित्त बुझेपछि खरिद गराए । आफैँले ट्रक पनि बन्दोबस्त गरे, प्रेस लाद्‌न लगाए र मसँग त्यसै ट्रकमा काठमाडौँ आए । फेरि मेरो पुतलीसडकस्थित 'रामझुपडी'को भुईँतल्लामा त्यो प्रेस जडान गर्न सबै व्यवस्था समेत मिलाइदिए ।
तर जीवनको उत्तरार्द्ध कालमा उनी दोस्रो घरजम गरी पाटनतिर बस्न गएछन् । त्यसपछि हामी एक-अर्काबाट टाढिँदै जानु स्वाभाविक थियो । यही क्रम केही वर्ष जारी नै रहेको थियो मैले उनको दर्शन धेरैपछि एकैचोटि वीर अस्पतालको आइ.सी.यू. (I.C. U) मा मात्र पाएँ र त्यही अन्तिम भेट पनि हुन गयो …. ।
* प्रथम प्रकाशन: 'सम्झाउनी बिर्साउनी', निर्माण प्रकाशन, गान्तोक सिक्किम (सन् २००५)* हामीले साभार गर्‍यौँ : शङ्कर स्मृति (व्यक्ति, कृति र स्मृति) सन् २००६- पैरवी बुक्स, काठमाडौँ । सम्पादक- प्रकाश सायमी ।
Posted by Jotare Dhaiba at 9:28 PM
दीपक जडित June 8, 2009 at 2:47 AM
छोटो नै सही तर जिज्ञासा मेट्दै शंकर-पाटो खोजेर प्रस्तुत गर्नुभएकोमा धाईबाजीलाई धन्यवाद !
Dilip Acharya June 8, 2009 at 8:29 AM
'लघु संस्मरण' नै भने पनि हाम्रो लागि भने यो पाटो नितान्त नयाँ र रोचक रह्यो।
मलाई त यो लघु संस्मरण पढेपछि झन बढि जान्ने प्यास पो पैदा भयो त । अरु पनि पढ्न पाईयोस भनेर अनुरोधै गरं ल मैले त ।
Jotare Dhaiba June 8, 2009 at 10:44 PM
नगेन्द्रज्यूको शङ्करबारेको यस लघु बयानले मलाई भने शङ्करको बौद्धिकता र कार्यकुशलतासँग अझ बढी परिचित बनायो । "कहिलेकाहीँ म स्वयम् शङ्कर सारोयान र लरेन्स लामिछानेमध्ये कुन चाहिँ बढी हुँ, ठम्याउनै सक्दिनँ !" भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा जति रमाइलो र ठट्टापूर्ण छ, यसमा शङ्करको इमान पनि झल्किन्छ । शङ्करसँग सम्बन्धित अन्य थप जुनसुकै सामग्री नगेन्द्रज्यूसँग छन् भने त्यसको आस्वादन लिने मौकाबाट अवश्य पनि 'शङ्कर स्मृति घर'का पाठकलाई वञ्चित गराउनुहुनेछैन । यस्ते सहयोग पाइरहौँ हामीले । सादर धन्यवाद !
Prabin Jha June 9, 2009 at 12:16 AM
ramro lagyo padhera keep it up